शब्दकोश: प्रेमको जन्म, प्रेमको मृत्यु
के प्रेम गर्भधारण हुने कुरा हो ?
प्रेमको जन्म हुन्छ ?
अनि प्रेम मर्छ पनि ?
यी प्रश्नका चराहरूले मेरो टाउको दुखाएका छैनन्, बरु मन भने मज्जैसित ठुँगेका छन् । प्रेमको बारेमा मैले कहिलेदेखि सोच्न थालेँ, अनि यो सोचाइ कहिले बन्द हुन्छ, यकिनसाथ भन्न सक्दिनँ । मेरो जन्मसँगै प्रेम जन्मियो कि ? यसको माने मेरो जन्मअघि प्रेम नै थिएन भन्ने होइन । मेरो जन्मले मेरै परिवेशको प्रेम लिएर आएको चाहिँ हो । यसर्थ अब के त उसोभए मेरो मृत्युसँगै त्यो प्रेम जानेछ, होइन त ? अर्थात् प्रेमको मृत्यु ।
एकजना दाइ साथी (साथी मात्र र भाइ साथी पनि हुन्छन् क्यार) सँग ६/७ महिनाअघिको भेटको एक प्रसङ्ग सम्झिन्छु यतिखेर । डिल्लीबजारबाट पुतलीसडकतिर ओरालो झर्दै गर्दा कोठाबाट निस्किएर आउँदैछु भन्ने कलेजको एउटा साथीलाई कुर्दै थिएँ । छेउकै ध्रुवको पसल पत्रपत्रिकाघरमा मान्छेहरू आइरहेका थिए, गइरहेका थिए । तर मैले पर्खिरहेको मान्छेको अत्तोपत्तो भएन । यत्तिकैमा तीन तन्नेरीहरू ओरालो झर्दै मेरो छेउमा आइपुगे । तिनले मेरो अफिसको आइडी निकालेर हेरे, पैसा कमाएको कुरा उप्काए, अनि साथीभाइको माहोलदेखि हराएकोमा मलाई प्रश्नहरूले चिमोट्न थाले । ती तीन तन्नेरी थिए सुरेश सुवेदी, घनेन्द्र ओझा र जय गौडेल । सायद उनीहरू गजलसम्बन्धी संस्था अनाममण्डलीद्वारा एकैचोटि प्रकाशनमा आउन लागेको १२ किताबका लागि दौडधूपमा थिए त्यसताका ।
'किन माया मारेको हो यसरी ?' सुरेश दाइले घट्टमा मकै ओइरिएजस्तै गरी सरक्क प्रश्न मेरो लागि पोख्‍नुभयो । साप्ताहिक पत्रिकामा कामको चापबारे दाइ अनभिज्ञ हुनु स्वाभाविक थियो । त्यही कामकै गुफामा म भूमिगत बन्नुपरेको लामो कथा सुनाएर पनि मेरै अनुभव घोलेर बुझाउन गाह्रो थियो । मैले प्रश्नको जवाफ दिने सिलसिलामा यस्तैयस्तैमा भनिदिएँ-'माया मारेको होइन, आफैँ मरेको हो ।' सुनेर के असर पर्‍यो थाहा भएन । त्यसपछि पनि संयोगले जम्काभेटबाहेक नियोजित भेटघाट लामो कालसम्म हुन सकेन । ती तन्नेरीहरूसँग बिदावारी भइसकेपछि आफूले बोलेको कुराबारे सोचेँ, मरेको माया...।
पुरानो हुँदैन माया भन्ने गीतमा मात्र होइन, बोलीचालीमा पनि धेरै ओठहरूबाट सुनेको छु । यस्तै तन बूढो भए पनि मन बूढो नहुने प्रसङ्गले त हाम्रा हजुरबा/आमालाई राम्रो भरथेग गरेर जोश भरेको छ । तर नयाँ-पुरानोको कुरामा यसो सोच्दा, मानवको यात्राक्रममा हिँड्दाहिँड्दै घुँडा खिइएजस्तै आत्मीयता र मायाको दूरी बढ्दै जाने त होइन भन्ने लाग्छ । हिजो मन परेको मान्छे आज झर्कोलाग्दो हुनु, छायादेखि पनि पन्छिन खोज्नु, निकट हुने आतुरता सबै सेलाएर फिल्मी ट्राजेडीकै हाराहारीमा नौ डाँडापारि पुग्नु ।
खोइ के पो हुन् यी कुराहरू ।
जति गरे पनि भन्नै नसकिने ।
भने पनि कहिल्यै नसकिने ।
मे १८, २००८ (नक्साल)